‘महारानी’ भन्दै बालुवाटारबाट ठगीधन्दा चलाउने लक्ष्मी, यस्तो छ वास्तविकता | Ratopati
‘महारानी’ भन्दै बालुवाटारबाट ठगीधन्दा चलाउने लक्ष्मी, यस्तो छ वास्तविकता
personसुजन पन्त exploreकाठमाडौं access_timeजेठ १८, २०७६ chat_bubble_outline1
काठमाडौं । डोल्पा घर भएकी लक्ष्मी बोहराले आफू बेलायतमा बस्ने र नाम बडामहारानी राज्यलक्ष्मी राणा भएको बताउँदै आएकी थिइन् । ‘राणा परिवारको मान्छे हुँ’ भन्दै हिँड्ने न उनी ‘महारानी राज्यलक्ष्मी राणा’ हुन् न त राणा परिवारको मान्छे नै । उनी बेलायतमा समेत नबस्ने गरेको खुल्न आएको छ ।
June 1, 2019, 4:19 p.m. aarju bista salyani
मीत्र यस्तो राम्रो बिचारको लागि धन्यवाद ।. एउटा व्यक्ति विशेषलाई गालि गर्ने नाममा सम्पूर्र्ण क्षेत्री बाहुनलाई आक्षेप लगाउनु भयो । छोयो तपाँईको गालिले । गालि जो हो उसैमागि केन्द्रीत होस् । एउटालाई भन्दै गर्दा अरुलाई चाँहि होच्याउन त भएननि । मानिस जो पनि सत्यको पक्षमा उभिनै पर्छ । के हो एउटै ड्याङको मुला भनेको ? सोहि प्रश्न तपाँईलाई कसैले गर्यो भने के भन्नुहुन्छ ? जस्ले गलत काम गर्छ उ कानूनको भागिदार बन्नै पर्छ । उस्ले गलत गर्यो भनेर जातसंग जोडेर त्यो जातका सबैलाई उहि ड्याङका मुला भन्नु यो त अति भयो नि होईन ? जातभातको खरो नारा लगाएर सबैलाई एउटै टोकरी राख्ने काम गर्ने हो भने त यो मुलुकमा सबैको हैसियत छर्लङ्ग छ । होलसेलमा सबैलाई गालि गर्नु यो त महापाप र अन्याय हो । मलाई मेरो अधिकारमाथि अपमान गरिएको महशुस भयो । मीत्र होलसेल र जातपातको आक्षेप भन्दा माथि उठेर न्याय र अन्यायको पक्षमा बहस् गरौं । हामी सबैको जय होस्
परपुरुषसँग मिलेर श्रीमानको हत्या, सेफ्टीट्याङ्कीमा सडेको अवस्थामा शव फेला